6 layliyo xoog leh oo miskaha ka sii xoog badan (tababarka sinta, fidinta iyo jimicsiga sinta)
27 / 04 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Jimicsiyada xoog/av waxyeelladayda
Miyaad dhib ku haysaa sinta oo xanuunta? Halkan waxaa ah 6 jimicsi xoog leh oo bixiya miskaha xoog leh iyo xasilloonida sinta oo kordha - tani waxay u horseedi kartaa xanuun yar iyo shaqeyn fiican. Tani waxay sidoo kale yareyneysaa fursadaha dhaawacyada ka yimaada dhicitaanka iyo dhaawaca.
Xanuunka miskaha waxaa sababi kara dhowr arrimood oo kala duwan, laakiin qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa culeys xad dhaaf ah, dhaawac, is qabad / arthrosis, culeyska muruqyada oo shaqeynaya iyo cillad farsamo. Waxa sababahani ka siman yihiin ayaa ah in aqlabiyadda badani ay aad uga fiicnaato laqabsashada, tababarka habboon iyo daaweynta.
Talooyin: Raad-raac (sida kuwan oo kale - xiriirku wuxuu ka furmayaa daaqad cusub) waxay faa'iido u lahaan kartaa kala soocida muruqyada miskaha, sidaas awgeedna si wax ku ool ah loogu tababaro. Barnaamijka hoos ku qoran ayaa sidoo kale la adeegsadaa basaska yaryar.
X-ray-ga. Sawirka: Wikimedia Commons
Qodobkaan waxaan diiradda ku saarnay jimicsi xoog leh oo naxariis leh laakiin loogu talagalay sinta, kala-goysyada misigta, dhabarka hoose iyo miskaha. Laakiin maskaxda ku hay in haddii aad leedahay cudur jira, ay waxtar kuu yeelan karto inaad kala tashatid takhtarkaaga kahor intaadan isku dayin layligaan.
VIDEO: Shaqaalaynta Guriga ee Waxtarka ah ee Hips-yada
Fiidiyowga hoose waxaad ku arki doontaa 4 ka mid ah 6 jimicsi oo aan ku xusnay qodobkaan. Taabo muuqaalka si aad u bilowdo fiidiyowga.
Xor baad u tahay inaad isqorista bilaashka ah kanaalkeena Youtube (halkaan riix) oo ka mid noqo reerkeenna!
1. Natiijada dhinaca tareenka tababarka
Layligani waa tababar aad u wanaagsan oo ku saabsan murqaha kursiga, kaas oo door muhiim ah ka ciyaara xasilinta iyo xoojinta sinta. Raadi koox tababbaran (oo sida caadiga ah loogu habeeyo jimicsiga noocan ah) oo lagu xidhi karo labada geesood sidii goobaabin ballaaran.
3. "Daanyeerku wuu socdaa" oo leh dabacsanaan
4. Layli fidinta hal-lugood iyo 5. natiijada
- natiijada waxaa loo samayn karaa dhowr siyaabood, labadaba buugaagta miisaanka leh iyo kuwa aan lahayn. Xusuusnow xeerka "ha ku jilcin suulasha", maxaa yeelay tani waxay ku siin doontaa cadaadis badan jilibka waxayna u horseedi kartaa dhaawac iyo cuncun labadaba. Jimicsiga wanaagsani waa layli si habboon loo fuliyo. Ku -celcelinta iyo qaab -dhismeedyadu way ku kala duwan yihiin qofba qof - laakiin 3 qaybood oo ah 12 ku -celcelin ayaa ah wax la higsanayo.
6. Jimicsiga Oyster
Xor baad u tahay inaad layligaan la wadaagto saaxiibbadaa iyo kuwa aad isbarataan. Haddii aad jeclaan lahayd laylisyada loo diro dukumiinti ahaan oo leh celcelis iyo wixii lamid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada.
Soor miskaha? Ma ogtahay in xanuunka sinta uu kasii dari karo dhibaatooyinka jilibka? Waxaan kugula talineynaa qof walba oo xanuun sinta leh inuu isku dayo tababar kordhinta loogu talagalay jilbaha iyo anqawyada sidoo kale. Waxa intaa dheer in this, isticmaalka joogtada ah ee keebka kubadaha dhibic (eeg tusaalaha halkan - xiriiriye wuxuu ka furaa daaqad cusub) oo ka soo horjeeda muruqyada sinta iyo kursiga ayaa lagula talinayaa.
PAGE xiga: Waxa ay Tahay In Aad Ka Ogaato Osteoarthritis-ka ku yaal Hip
Guji masawirka ama isku xirka sare si aad ugu gudubto maqaalka soo socda.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-for-sterkere-hofter-edited-800.jpg?media=1648573622 521 800 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-04-27 20:45:312021-04-20 18:58:466 jimicsi xoog oo ah miskaha adag
Planus lichen 6 jimicsi caloosha ah oo loogu talagalay muruqyada dhinaca ka fiican oo xoog badan